कठै बिजोग ! एकै घरका खेल्ने पढ्ने उमेरका दाजुभाइको दु’खत निधन ! – Dainik Sangalo
कठै बिजोग ! एकै घरका खेल्ने पढ्ने उमेरका दाजुभाइको दु’खत निधन !
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: ११:५५:३२
ईंटा उद्योगले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डु,बे,र एकैघरका दाजु र भाइको मृ, भएको छ । प्रहरीका अनुसार सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–११ गम्हरिया निवासी सद्दाम अन्सारीका ८ वर्षीय छोरा रेआज र ६ वर्षीय छोरा नेआज अन्सारीको बुधबार मृ, त्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रबक्ता मदन कुँवरका अनुसार पौडी खेल्ने क्रममा डु,बे,का दाजुभाइलाई तत्कालै ईंटा उद्योगका मजदुर र गाउँलेले पानीबाट निकालेर उपचारका लागि मलंगवा अस्पतालमा पुर्‍याएलगत्तै उनिहरुको मृ, भएको हो । यस्तै मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा चट्याङका कारण एक जनाको मृ,त्यु भएको छ भने चार जना घा,इ,ते भएका छन् । बुधबार दिउँसो वर्षासँगै एक्कासि परेको च,ट्या,ङले लागेर रङ्गेली नगरपालिका–६ मलङ्गथानका २० वर्षीय नितेश रायको मृ,त्यु भएको हो ।
निमाया भन्छिन्, ‘५० सालमा जन्मेको हुँ । ६४ सालमा बिहे भयो, १६ वर्षमा ठूलो छोरी जन्मिइन् । ठूलो छोरी अहिले १२ वर्षकी भई,’ उनले भनिन्, ‘अर्को चार वर्षकी भई । माहिली नौ वर्षकी, साहिली छोरी सात वर्षकी भई,’ उनले भनिन् अर्की चार वर्षकी भई ।। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। एउटी काखकी छोरी १० महिनाकी छ, ‘छोराको आशामा धेरै सन्तान जन्माएको हो रु’ भन्ने प्रश्नमा उनले सकारात्मक जवाफ दिइन् । अरु बच्चा जन्माउने योजना रहे नरहेको भन्ने उनले केही बोल्न चाहिनन् ।
पहिलो छोरी अस्पतालमा जन्माएकी हुन् । भने बाँकी सबै घरमै जन्माएकी हुन् । ‘सुत्केरी हुँदा दुई, तीन वटा कुखुराको मासु खान पाइन्छ त्यसैले कमजोर त भइँदैन’, निरमाया भन्छिन्, ‘यता त यस्तै चलन हो । सबैका पाँच , सात जना छोराछोरी हुन्छन्’ सानै उमेरमा बिहे गर्ने, कम जन्मान्तरमा धेरै सन्तान जन्माउने गर्दा यहाँका महिलामा पाठेघर खस्ने लगायतका समस्या धेरै देखिने गरेको छ
Last Updated on: September 22nd, 2021 at 11:55 am